Posted by: chhepyastra weekly | फ्रेवुअरी 11, 2012
जनताको संविधान नलेखिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।
०	सत्रौ जनयुद्ध दिवस आइपुगेको छ, के यसबीचमा तपाईंहरूको लक्ष्य पूरा भयो त ?
अहिले हामी सशस्त्र जनयुद्धलाई स्थगित गरेर संसद्वादी दलहरूसाग विगत पाच वर्षदेखि शान्तिप्रक्रियामार्फत् वैचारिक राजनीतिकरूपमा टेबुल संघर्षमा छौा । अहिले संघर्षको रूप बद्लेर हामी अगाडि बढिरहेका छौा । यो दुवैको योगलाई हेर्ने हो भने हामीले नेपालमा स्थापना गर्न खोजेको सामन्त, नोकरशाह सत्ताको अन्त्य र जनताको जनवादी सत्ता स्थापना नै हो । हामी यो प्रक्रियाको निकै नजिक पुगेका छौ । यो नै ठूलो उपलब्धि हो । यो पााच वर्षको बीचमा पार्टीभित्र विचारको बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समय एक पटक प्रतिक्रियावादी, अवसरवादीहरू फेरि असफलसिद्ध भएका छन् । नेपाली जनता क्रान्तिकारी विचार, जनयुद्ध फेरि नयाा ढङ्गले नयाा चरणमा विजयी भएको छ । यो नै ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ ।
०	तर, तपाईंले भनेभन्दा विपरीत माओवादी संसदीय भासमा भासियो, आˆनो लक्ष्यबाट विमुख हुादै गएको छ भन्ने आरोप लगाउाछन् नि ?
संविधानसभा निर्वाचनपछि हाम्रो पार्टीभित्र संगठन, आचरण र संस्कारको दृष्टिले मालेमावादी हाम्रा मान्यतालाई चुनौती दिने खालका विकृति र विसंगति आएकै हुन् । जनताले आˆनो तहबाट हाम्रो पार्टीप्रति गर्ने आलोचनालाई मनोगत भन्न सकिादैन, त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । विकृति र विसंगति पार्टीभित्र देखिएपछि नै पार्टी जीवनमरणको भीषण संघर्षमा प्रवेश गर्यो । त्यो संघर्षको बीचबाट पार्टी अहिले नीति, संगठन र विचारको दृष्टिले नयाा ठाउामा पुगेको छ । त्यसले नयाा आकारसमेत निर्माण गरेको छ । पार्टीलाई संसद्वादी धारमा ढल्काउन चाहनेहरू पछिल्लो समय असफल भएका छन् । अहिले माओवादी पार्टीभित्र अभिजात वर्गीय संसद्वाद जो पस्न थालेको थियो फेरि परास्त भएको छ । यो पार्टी माओवादी नै हुन्छ अरु हुनै सक्दैन ।
०	माओवादी पार्टी खाली टालटुले तरिकाले समस्या समाधान गर्छ, पार्टीभित्र समस्या छ तर समाधान गर्न सकिरहेको छैन भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ नि ?
विचारको अभाव पार्टीभित्रको समस्या होइन, समस्या नीति बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने सवालमा हो । नीतिलाई तोडमोड गरी लागू गर्ने सन्दर्भमा समस्या हो र यसरी सही रूपमा बाहिर विवाद एवं समस्या पैदा भएको हो । नीति सही बन्ने लागू नहुने नै विगतको मुख्य समस्या हो । अहिले पार्टी त्यसबाट माथि उठेर अगाडि बढिरहेको छ । अहिले हामीले केन्द्रीय समितिमार्फत् नीति नियमहरू निर्माण गरेका छौा । अब पार्टी सही ढङ्गले नीति कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छ । अहिले पार्टीले मुलुकको मुख्य मुद्दा सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा आˆनो स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । संविधान राज्यसत्तालाई बदल्ने खाले हुनुपर्छ । राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाह र सामन्तहरू होइन कि मजदुर किसान र मध्यमवर्ग आउनुपर्छ । राज्यको मूल प्रवाहमा सबै दलित, पीडित सबैको पहुाच हुनुपर्छ । जनताको संविधान लेख्न हामी दृढ छौा । जनताको संविधान नलेखिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।
०	अहिले तपाईंहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ तर सरकारको कार्यशैली हेर्दा त पार्टीले लाज मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि ?
सरकारको पछिल्लो कार्यशैली हेर्दा लाज मान्नुपर्ने खालको देखिन्छ । सुरुमै यो सरकार गलत आधारमा खडा भएको हो । गलत आधार र मान्यतामा बनेको सरकारले काम राम्रो गर्न सक्ने हुनै सक्दैनथ्यो । हामीले त्यहीबेला नै राजनीतिक दृष्टिले यो सरकारको विरोध गरेका थियौा । त्यो विरोध अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । आमजनतामा यो सरकार इतिहासमा सबैभन्दा बद्नाम सरकार भयो भन्ने परेको छ । अब नयाा ढङ्गले खोज्ने बेला आएको छ ।
०	पार्टीको निर्देशन नमान्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब कति समय सरकारमा राखिराख्नु हुन्छ ?
सरकारको विषयमा स्थायी समितिमा छलफल चलिरहेको छ । स्थायी समिति बैठकबाट नै हामी सरकारको विषयमा निर्णयमा पुग्छा । अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय सरकार हो, त्यसको लागि केन्द्रीय समिति बैठकले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । अन्य दलहरूले पनि संसद्मा यो सरकारको राजीनामा मागिराखेको अवस्थामा यो सरकारको औचित्य समाप्त भएको प्रस्ट भइसकेको छ । सरकारको विषयमा हामी स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्छौं ।
०	अहिले माओवादी पार्टीभित्र नेपाली उखान ‘काग कराउादै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
बसहलाई संश्लेषण गरेर नीति बन्ने हो, त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पार्टीका सम्पूर्ण नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैको कर्तव्य हो । नीतिलाई कोही नेताले धोका दिन्छ भने त्यो आˆनो वर्ग र क्रान्तिलाई धोका दिएको हुन्छ । हामी आˆनो ठाउाबाट आˆनो नीति, कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेका छौ, जसले पार्टीको नीतिलाई आत्मसात गर्दै लागू गरेको छैन, त्यसविरुद्ध हामी अगाडि बढिरहेका छौ । हामी आˆनो जिम्मेवारी पूरा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ । आˆनो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हट्ने नेतृत्वविरुद्ध हाम्रो संघर्ष जारी रहेको छ । हामी यो पहलकद्मीमा लागिरहेका छौ ।
०	जनसेनाको सम्मानजनक समायोजन हुने भनिएको थियो तर उनीहरूलाई बिचल्ली पारेर विघटनतर्फ पुर्याउनु भयो नि होइन ?
अहिले सेना समायोजनमार्फत् राष्ट्रिय सेना निर्माणको कुरा निकै अस्तव्यस्त भएको छ । छ हजार पााच सयको संख्यामा जनमुक्ति सेनालाई व्यक्तिगतरूपमा होइन, समूहगतरूपमा प्रवेश गराइनुपर्छ । उनीहरूलाई सशस्त्ररूपमा नै समायोजन गरिनुपर्छ । जनसेनालाई कुनै पनि हालतमा विघटन हुन नदिने हाम्रो नीति बनिसकेको हुनाले अबका दिनहरू सकारात्मकरूपमा अगाडि बढ्लान् ।
०	माओवादी पार्टीलाई दाह्रा र नङ्ग्रा नभएको बाघ बनाउने भनेर संसद्वादी दलहरू लागेका थिए, अहिले त्यो प्रमाणित भयो नि होइन ?
संसद्वादीहरूले जुन ढङ्गले भने त्यो हाम्रोविरुद्धको षड्यन्त्र हो । उनीहरूले भन्दैमा हामी दाह्रा र नङ्ग्रा नभएको बाघ कसरी हुन्छौ, हुादैनौ । बरु हामी हाम्रै कारणले गर्दा दाह्रा, नङ्ग्रा नभएका जस्ता भएका थियौा । त्यसैले पार्टीभित्र भीषण बहस चल्यो । त्यस बहसले पार्टीलाई अझै बलियो बनायो । यो प्रस्ट्याइले सबैका अनुमान गलत सावित भएका छन् ।
०	तपाईं सभासद्समेत हुनुहुन्छ तोकिएको समयभित्र नयाा संविधान जारी हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
अहिलेको संविधान निर्माणको समस्या भनेको समयावधिको अपर्याप्तता होइन । संविधानका मुख्य मुद्दाहरू जनताको आकांक्षा र चाहनाअनुसार निष्कर्षमा पुर्याउनु नै अहिलेको राजनीतिक समस्या हो । संसद्वादीहरू संविधान निर्माणको नाममा दलाल, नोकरशाह र सामन्ती सत्तालाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउन चाहन्छन् । उनीहरू त्योभन्दा माथि उठेनन् भने चार वर्ष संविधानसभाको म्याद थपिए पनि संविधान बन्दैन । त्योबाट माथि उठेर संसद्वादीहरू जनताको स्वायत्तताको सुनिश्चितता भएको संविधान बनाउन तयार भयो भने बााकी समयमा संविधान जारी हुन्छ । यस विषयमा कााग्रेसले एमाले विशेष गरी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
०	तपाईंहरूले भनेजस्तो संविधान बनेन भने तपाईंहरू जनविद्रोहमा जानु हुन्छ ?
अहिलेको हाम्रो नीति भनेकै वजनताको संविधान निर्माणको लागि घनिभूत ढङ्गले लाग्नु नै हो । हामी त्यसको लागि अन्तिम पहल गर्ने निर्णयमा पुगेका छौ । संविधानसभामार्फत् जनसेनाको सम्मानजनक समायोजन, राष्ट्रिय सेनाको निर्माण अनि जनसंविधान बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौा । त्यसको लागि हामी क्रियाशील हुन्छौा । यसको विरुद्ध षड्यन्त्र हुन थाल्योभ ने उनीहरूबाटे यस प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगछ । संविधान निर्माणलगायत समग्र शान्तिप्रक्रियामा अवरोध भयो भने यनिणर्ायक आन्दोलनमा उत्रनको लागि हामीले जनतालाई अपिल गर्नेछौा । किनकि हामी नेपाली जनताको पार्टी हौा । हामीलाई नेपाली जनताले ठूलो जिम्मेवारी दिएका छन् । हामीले त्यो पूरा गर्न कुनै पनि हालतमा चुक्ने छैनौा ।